‘आमा’ को फस्टलुकमा सुरक्षाको यस्तो रुप - चौतारीपोष्ट अनलाईन
‘आमा’ को फस्टलुकमा सुरक्षाको यस्तो रुप
भर्सटायल अभिनेत्रीको रुपमा चिनिएकी सुरक्षा पन्तको निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित फिल्म ‘आमा’ को फस्टलुक पोस्टरमा देखिएको भिन्न लुक्सले धेरैलाई चकित बनाएको छ । दशैंको शुभकामना स्वरुप बिहीबार निर्माण टिमले सार्वजनिक गरेको पोस्टरमा उनी कपालको आधा भाग कोटिएको अवस्थामा देखिएकी छन् । जहाँ उनलाई भावुक मुद्रामा देख्न सकिन्छ ।
अर्को पोस्टरमा उनीसँगै अभिनेत्री मिथिला शर्मा पनि फिचर्ड छन् । फिल्ममा मिथिलाले सुरक्षाको आमाको भूमिका निभाएकी छन् । फिल्मले एक छोरी र आमाको भावनात्मक सम्बन्धको कथा भन्ने निर्माण टिमले बताएको छ । ‘पशुपतिप्रसाद’ जस्तो यादगार फिल्म पस्किएका दीपेन्द्रको एक्सन-कट रहेका कारण यो फिल्मको दर्शकमा व्यग्र प्रतिक्षा छ । फिल्म फागुन ९ मा प्रदर्शन हुँदैछ ।
निर्देशक खनालले ‘पशुपतिप्रसाद’ पछि आफूले मनछुने फिल्म ‘आमा’ लिएर आउन लागेको बताएका छन् । उनी आफैंले फिल्म खिचेका हुन् । भने, कथा पनि उनकै हो । सुरक्षा र मिथिलाका अलावा फिल्ममा देशभक्त खनाल, सरिता गिरी, लक्ष्मी भुषाल, टीका पहारीलगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । फिल्मको गीत भुपेन्द्र खड्काले लेखेका हुन् ।
शर्मिला पाण्डे निर्मिल फिल्मको छायांकन काठमाण्डौ र रामेछापमा भएको हो । फिल्मका सह–निर्मातामा सन्तोष अधिकारी छन् । सुभाष भुषालले फिल्मको गीतमा संगीत भरेका छन् । दर्के झरी नपर्दा छायांकन सुरु भएको करीब ७५ दिनपछि फिल्मको सुटिङ प्याकअप भएको थियो । डिएस डिजिटलको ब्यानरमा बनेको फिल्मको अधिकांश दृश्य पानीमा खिचिएको छ ।flimikhabaronline
Prevखुश्बु हिस्सै !
Next‘टेप’ प्रकरणमा जोगिएका महरालाई ‘रेप’